SatNOGS: Gadzira netiweki yenzvimbo dzepasirose nhepfenyuro neRaspberry uye Arduino | Linux Vakapindwa muropa
SatNOGS: gadzira netiweki yenzvimbo dzepasirose satellite zviteshi neRaspberry uye Arduino
Iyo purojekiti SatNOGS (Satellite Yakavhurwa Ground Chiteshi) isoftware yemahara uye yakavhurwa sosi Hardware chikuva yakagadzirirwa kugadzira network yenzvimbo dzepasi pasi satellite.
Chiyero cheprojekti ndechekugadzira yakazara yakazara yeakavhurika matekinoroji zvichibva pamatanho akavhurika uye kuvaka chiteshi chevhu chakazara se stack showcase.
SatNOGS inotarisira kuve chikuva chakagadziriswa modularity, Yakavakwa kubva kumaturusi anowanikwa uye anodhura uye zviwanikwa.
1 Nezve SatNOGS
2 Zvimiro zveiyo SatNOGS chirongwa
2.4 Nzvimbo yepasi
3 Ungatanga sei yangu SatNOGS chirongwa?
Ichi chirongwa yakatanga pakati paApril 2014, panguva yeNASA hackathon Space App Dambudziko pa hackerspace.gr.
Mushure meiro basa rekutanga, iyo SatNOGS timu yakapinda mukutanga iteration yeHackaday Award uye ndokuhwina nzvimbo yekutanga, chii yakavapa kukurudzira kukuru (zvese zviri maererano nezviwanikwa uye nharaunda) kutanga iyo Libre Space Foundation.
Pakutanga, SatNOGS yaive nechinangwa chayo chikuru kupora kwemasaini kubva kuma satellite eLEO pane UHF uye VHF mabhendi.
SatNOGS inogona kudzosera mamodhi emamiriro uye telemetry, payload data (kuyedza) yesainzi uye yekutsvagisa satellites (semuenzaniso magnetospheric kuyedza), data yemamiriro ekunze, nezvimwe.
SatNOGS ine dhizaini uye yepasi rose manejimendi manejimendi (SatNOGS Network) kufambisa mashandiro enzvimbo dzinoverengeka dzepasi kure.
Mucherechedzi anogona kutora mukana weiyo yakazara network ye SatNOGS nzvimbo dzepasi kutenderera pasirese.
Zvimiro zveiyo SatNOGS chirongwa
Sezvambotaurwa pakutanga, SatNOGS inovavarira kupa stack yezvigadzirwa inodikanwa kune yakaparadzaniswa netiweki yenzvimbo dzepasi masateti mune yakaderera Earth orbit.
Kuti uite stack yakadaro, ma subproject mana anotevera akagadzirwa:
SatNOGS Network iri yewebhu kunyorera kuronga kuronga kuburikidza nepasi chiteshi network.
Nekuchengetedza modular yekuvakisa kunoenderana neterevhizheni kutaurirana, kure kuwana kunovimbiswa uye iyo inochinjika dhizaini inosangana nezvose zvinogoneka zvinodiwa.
Dhatabhesi reSATNOGS iri a multisource app inobvumidza vashandisi kuratidza satellite satellite transmitter ruzivo kwema satellite aripo. Dhata rako rinowanikwa kuburikidza neAPI.
SatNOGS Mutengi ndiye software inomhanya pazviteshi zvepasi, kazhinji pazvirongwa zvakadzamirwa, iyo inogamuchira zvakatarwa zvakacherechedzwa kubva kunetiweki, inogamuchira iyo satellite kutapurirana, uye inotumira iyo zvakare kunetiweki webhu kunyorera.
SatNOGS Ground Chiteshi chiri yakavhurwa sosi Hardware pasi chiteshi chishandiso ine rotator, maantena, zvemagetsi uye zvakabatana neMutengi. Iyo yakavakirwa pane 3D yakadhindwa zvinhu uye zvinowanika nyore zvinhu.
Icho chinoshamisa ndechekuti zvese zvakavhurwa sosi uye chirongwa chinosanganisira zvese zvakakosha zvinhu yekutambira iyo data, kusanganisira dhizaini yeantena uye yavo mota (inoda 3D printer), asi zvakare kududzira uye kuunganidzwa kwedata.
Zvichitaurwa zviri nyore, SatNOGS inopa nharaunda nemhando dzakasiyana siyana dzekuvhura maturusi ekuti uwane data kubva kune ese ma satellite.
Musimboti wepurojekiti iyi inharaunda yevaidzidziri veredhiyo, Vanofarira nzvimbo, vanoita setiraiti, programmers, vakaungana vakatenderedza zano rakareruka: "Nzvimbo yekunze yakavhurika uye inowanikwa kune vese."
Ungatanga sei yangu SatNOGS chirongwa?
Zvese software (network, satellite database, mutengi uye zvimwe zvishandiso) Hardware (antenna kutenderera nezvikamu uye 3d yakadhindwa emagetsi) inofanirwa kuwana data kubva kuma satellite ese anowanikwa paGitLab.
Kana zvakadaro iyo yepamutemo webhusaiti yeprojekiti iwe yaunogona zvakare kuwana zvakanakisa zvinyorwa maitiro ekutanga kana iwe uchida kugadzira yako wega projekiti, uko iko kuvaka kwakatsanangurwa nhanho nhanho.
Pamusoro pekuitwa kweiyo software (mutengi) pane yako Raspberry Pi.
Iyo satNOGS nharaunda iri kuramba ichikura uye nhasi, kune zvinopfuura makumi matanhatu epasi zviteshi munzvimbo yekugadzira uye mazhinji akawanda mune yekusimudzira nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » SatNOGS: gadzira netiweki yenzvimbo dzepasirose satellite zviteshi neRaspberry uye Arduino